Magaalada Dakar, Aïsha Dème wuxuu ku ifaya dunida dhaqanka - JeuneAfrique.com - KU SAMEE
Magaalada Dakar, Aïsha Dème wuxuu ku ifinayaa dunida dhaqanka - JeuneAfrique.com
xnxx: khaladaadka qaar ay sameeyeen raga sariirta jooga !!
Bixinta Xirfad Barasho
Guinea: Ceni wuxuu joojiyay xagjirnimada hawlgal gargaar ...
Afro cut, sawirka saacadaha iyo kabaha dhaadheer… Dhamaan Dakar waxay ogyihiin muuqaalka dhalaalaya ee Aïsha Dème. Markii ay jirtay 44, madaxweynihii hore ee muusikada Afrika ayaa hadda madax ka ah Siriworo ("dhimbiil", Wolof), oo ah hay'addii ugu horreysay ee injineernimada dhaqanka ee waddanka, oo ay aasaastay 2017.
Dakar, caasimad hab XXL ah
Magaaladan muqaddaska badan, ee hurdada ka toosay habeennada caasimadda muddo sannado ah isagoo la wadaagaya qorshayaashiisa wanaagsan, fikradaha dibad-baxyada, riwaayadaha iyo bandhigyada, ayaa ka soo jeeda qoys miyi ah oo ka soo jeeda tuulo Saloum, oo u dhow. laga bilaabo xadka Gambiya.
Aïsha Dème wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray Dakar. Arday wax barta oo dhigta dugsiga sare ee Lamine-Gueye, waa daawashada ciyaarta Lu eup turu ("Waa kufilan tahay wax badan"), iyada oo Awa Sène Sarr, tiyaatarka Sorano, ee Plateau, in ay ku baraarugtay hamigeeda fanka iyo dhaqanka.
Sida da 'yarta badan oo da' ah, waxay si joogto ah u baahin jirtay xarunta dhaqanka ee Faransiiska sannadihii 1990, halkaas oo ay ku raaxaysatay isticmaalka saacadaha akhriska iyo dib-u-akhrinta Cheik Anta Diop, Victor Hugo, Daniel Pennac iyo, dhammaan, qorayaasha casriga ah ee ka imanaya galbeedka. -Africans: Boubacar Boris Diop ama Ken Bugul.
Sidoo kale waa halkan, dhawr sano kadib, inay la kulanto Jiilka Galsen (“Senegal”, in verlan) iyo raablayaasheeda - Positive Black Soul, Daara J, Faada Fredy, Pee Froiss, Rapadio… -, kuwaas oo badankood ay ku howlan yihiin sanadka 2011 dhaqdhaqaaqa ayaa quusan si ay uga mudaaharaadaan Madaxweyne Abdoulaye Wade. Hadafku waa markaa in codka dhalinyarada la maqlo si loogu dhaqaaqo siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan Senegal oo u muuqatay mid aad u dheer iyo Dakar aan lahayn shineemooyin, tiyaatarro, hoolalka shirarka ...
Goobta ayaa qarxisay maxaa yeelay waxaan soo qaadnay macluumaad badan oo la xaqiijiyey waqtiga dhabta ah
Iyada oo iyadu ah saynisyahano kombuyuutar ku leh baananka, Aïsha Dème ayaa iscasilay 2009 inta lagu gudajiray diyaarinta Bandhig Faneedka Adduunka ee Farshaxanka 'Negro Arts' ee Dakar (in la qabto Diisambar 2010). Iyada iyo saaxiibkeed Alassane Dème, oo ka soo laabanaya Mareykanka, waxay abuurtaa webzine agendakar.com (oo xirmay 2014). Halkaas ayay ku dhex martay dhacdooyin dhaqameed aad u xiiso badan, kuwaas oo intooda badan ilaa hadda la iska indhatiray haddii aysan gelin radarka dhaqanka hay'adeed. “Boggu wuu qarxay maxaa yeelay waxaan bixinnay macluumaad badan oo la hubiyay waqtiga dhabta ah, wuxuu ahaa kacaan ka dhacay Senegal. "
Maanta, iyada oo Siriworo, midda nafteeda ku qeexaysa inay tahay "u dhaqdhaqaaqaha dhaqameed" iyo "dhaqan bulimic" ayaa doonaysa, sida uu doonayay Senghor, inay dimuqraadiyeeyaan farshaxanka. “Dhaqanku waa inuusan noqon mid wax kala sooca, waa in lagu barto iskuulka. Waxay abuurtaa shaqooyin. Waxay ka hor istaagi kartaa dhallinteenna inay rabaan inay raacaan doomaha I Sabti kasta, waxaan soo qoraa si aan dadka uga dhigo inay baxaan. "
Aïsha Dème sidoo kale waxay taageertaa dhowr mashruuc oo farshaxan ah (bandhigyo farshaxan muuqaal ah, riwaayado, shirar gabayo ah, fiidkii slam, ciidaha, iwm) waxayna sii wadaa inay ku dhaafsato "talooyinkeeda dhaqan" shabakadaha bulshada. Waxay aad ugu firfircoon tahay halkaas, gaar ahaan inay dhiirrigeliso haweenka reer Senegal, kuwaas oo, sida ay sheegtay, "ay ku seexdeen waxoogaa guul-darrooyin ah tan iyo jiilalkii dumarka ee sharafta lahaa ee xorriyadda", si ay ugu sii lug yeeshaan waxbarashada iyo dhaqanka.
Senegal: boulevard du Général-de-Gaulle, oo garaaca wadnaha Dakar - JeuneAfrique.com
Aljeeriya: mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo doorashada madaxweynaha, in kasta oo nidaamka boliiska - JeuneAfrique.com
Guinea: Ceni wuxuu joojiyay xagjirnimada howlihii gargaarka ee laga codsaday OIF - Young
Coronavirus: madaxda dawladdu waxay u diyaar garoobaan wax ka qabashada - Jeune Afrique